रसुवागढी –काठमाडौँ रेलमार्गको अध्ययन शुरु, तीन महिनामा सकिने::Digital News Paper
काठमाडौँ – चिनियाँ प्राविधिक टोलीले रसुवागढी –काठमाडौँ रेलमार्गको अध्ययन शुरु गरेका छन् ।
यस्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले यही वैशाखको पहिलो साता गरेको चीन भ्रमणका क्रममा समेत रेलमार्ग निर्माण तथा विस्तारका बारेमा महत्वपूर्ण छलफल एवं विचार विमर्श भएको थियो । सोही छलफल र विचार विमर्शका आधारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अधिकारी र रेल विभागका अधिकारी चीन भ्रमणमा जानु भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अनुदानमा रेलमार्ग निर्माण गरिदिन चिनियाँ अधिकारी समक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो ।
नेपाली सीमा रसुवागढीदेखि काठमाडौंँसम्मको रेलमार्ग करीब एक सय किलोमिटर लामो हुनेछ । करीब एक घण्टाको यात्रामा रसुवागढीबाट काठमाडौँ आइपुगिने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । नेपाल र चीनलाई जोड्ने सो रेल चीनको ह्लासा–सिगात्से हुँदै केरुङबाट रसुवागढी नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्नेछ । सोही रेलमार्ग काठमाडौँबाट कुरिनटार हुँदै एउटा लाइन पोखरा जानेछ भने अर्काे लाइन लुम्बिनी जाने गरी प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको छ ।
७ यी हुन् उमेर छिप्पिएपछि पाको उमेरका धनाड्यसँग लगनगाँठो कस्ने नेपाली नायिकाहरु !
८ श्रीमती अन्तै सल्केको कसरी थाहा पाउने ? रहस्यमय जानकारी